प्रेम विवाह गर्छन् प्राय ५ राशिका मानिसले ( हेर्नुहोस) | Khabar Sadan खबर सदन
Home विविध प्रेम विवाह गर्छन् प्राय ५ राशिका मानिसले ( हेर्नुहोस)
हिन्दू धर्ममा विवाहको समयमा दुलाह र दुलहीको कुण्डली हेर्ने र मिलाउने परम्परा रहेको छ। यद्यपि धेरै मानिसहरूले कुण्डलीसँग सम्बन्धित परम्पराको पालना गर्दैनन्, विशेष गरी प्रेम विवाहमा। कुण्डलीको ज्योतिष शास्त्रमा विशेष महत्त्व छ। कुण्डलीबाट व्यक्तिको थुप्रै गुणका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तोमा केहि राशिका मानिसको कुण्डलीमा प्रेम विवाहको योग धेरै हुन्छ। जान्नुहोस् यी राशिको बारेमा….
मेष राशि : मेष राशिका मानिस धेरै भावनात्मक हुन्छन् र उनीहरु आफूले माया गर्ने मानिसमा पूर्ण विश्वास गर्छन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो हरेक सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छन् र यसलाई कायम राख्न धेरै मेहनत गर्दछन्। मेष राशिको मानिस धेरै जसो आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग वा आफ्नै समूह भित्रको मानिससँग प्रेममा पर्छन् र त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गर्छन्।
वृष राशि : यी व्यक्ति धेरै दृढ र मेहनती हुन्छन्। यी व्यक्तिहरूलाई निकै थोरै चीजहरू मात्र मनपर्छ। स्वभावैले यी व्यक्तिहरू धेरै जिद्दी किसिमका हुन्छन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न मन पराउँछन्। यी मानिस आफूले माया गरेको मानिसको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। यी मानिस प्राय: प्रेम विवाह नै गर्ने गर्छन्।
मिथुन राशि : आफ्नो मजाकी र सामाजिक स्वभावद्वारा यी मानिस आफूप्रति धेरै मानिसलाई आकर्षित गर्न सफल हुन्छन्। मिथुन राशिका मानिस आफ्नो काम र साथीको बारेमा गम्भीर नभएता पनि आफ्नो जीवनसाथी भने आफैं रोज्छन्। यी मानिस पनि प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छन्।
धनु राशि : यस राशिका व्यक्ति धेरै व्यवस्थित हुन्छन् र आफूले सोचे अनुसार नै जीवन बिताउँछन्। धनु राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा विवाह गर्छन्। यी मानिसले जस्तो सुकै समस्यामा पनि आफ्नो प्रेमीको साथ छाड्दैनन्।
मकर राशि : मकर राशिका मानिस आफूले माया गरेको मानिसको साथ कुनै पनि हालतमा छोड्दैनन्। यी व्यक्तिहरू आफ्नो छनौटको साथ धेरै सम्झौता गर्दैनन् र यसकारण ती व्यक्तिहरू प्रायः प्रेम विवाह गर्छन्।
Previous articleलाइसेन्स बिभागले जारी गर्यो यस्तो सुचना
Next articleरिचार्ज कार्ड चोरी गर्दा प्रहरिको फन्दामा
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,रआज – १८जेठ २०७८ मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ...
१८जेठ २०७८ मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल। मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) मित्र वा आफन्तको सहयोगबाट मिल्नेछ...
बसबाट यात्र गर्दा केही मानिसलाई किन उल्टि आउदछ ?यस्तो कारण हो
कसैकसैलाई बसमा यात्रा गर्दा बन्ता/उल्टी आउने समस्याले हैरान पारेको हुन्छ । बसमा चढ्दा किन 'बस' लाग्छ ? हाम्रो कामभित्र तीनवटा अर्धवृत्ताकार नलीहरू हुन्छन् । ती...